परितोषिकाको तीज- भावना परिष्कृत सुनुवार – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:१३ English
परितोषिकाको तीज- भावना परिष्कृत सुनुवार
यता परितोषिकालाई राम्रोसँग हेरेर बोल्ने कोही पनि थिएन आरकीडको घरमा । ‘न जातै मिल्छ, न भातै मिल्छ…, त्यस्ती केटीसँग बिहे गरेर हाम्रो नाकै काटिस् तैँले । बेक्कारै तँलाई सहर पढ्न पठाएछौँ हामीले’, भन्दै गनगन गरिरहन्थिन् सासू । आरकीडसँग भने बाबु पनि बोल्दैनथे । यस्तो अवस्थामा परितोषिकालाई विगत चार वर्षअगाडिको आफ्नो निर्णयमाथि पछुतो हुन थाल्यो । उनको घरकाले अन्तै बिहे गरिदिने भएपछि उनले आरकीडसँग बिहे गर्ने निर्णय लिएकी थिइन् । त्यस अवस्थामा उनले आरकीडलाई आफूसँग बिहे गर्ने सल्लाह दिएकी थिइन् । आरकीड प्रेमी थियो । उसको परितोषिकासँग माया पनि थियो । तर नोकरी नभएको कारणले चाहेर पनि बिहे गर्न असमर्थ थियो । परितोषिकाको हिम्मत र हौसलाले आखिरमा आरकीड तयार भयो बिहे गर्न । उनीहरुको अचानकको निर्णयले भएको विवाहले दुवैको घरपरिवारमा अशुभ घटनाको रुप लियो । परितोषिका र आरकीडबाहेक कोही पनि खुशी थिएनन् । तर यता परितोषिकाको माइती पक्षले भने केही समयपछि दुवैको सम्बन्धलाई स्वीकारे । आरकीडलाई नोकरी लगाइदिने काममा परितोषिकाका दाइहरुले मद्दत गरे । दुवै जना बिस्तारै सँगसँगै नोकरी गर्दै बाँकी अध्ययन जारी पनि राख्दै गए । आरकीडले परितोषिकालाई घर लान खोज्दा पनि परिवारको असहमतिको कारणले रोकिनु परेको थियो । यसरी चार वर्ष बितेपछि घरमा आरकीडकी हजुरआमा बिरामी परिन् । उनले नाति र नातिनी बुहारी दुवैलाई भेट्ने इच्छा जाहेर गरेपछि बल्ल घर जाने बाटो खुलेको थियो । आरकीडको परिवारले परितोषिकालाई स्वीकार्ने छैनन् त्यति सजिलै भनेर अनुमान नभएको भने हैन उनलाई । ‘मेरै कारणले आरकीडले मसँग बिहे गरेको हो । म नै दोषी छु, उनीहरुको इच्छाविरूद्ध यो घरको बुहारी हुनुमा’ भन्ने सोचिरहन्थिन् परितोषिका ।
उनलाई न त घरकै सदस्यको दर्जा मिल्यो, न त पाहुनाकै । हरकुरामा बेवास्ता र तिरस्कारको अनुभूतिले च्याप्दै लग्न थाल्यो परितोषिकालाई । बिरामी हजुरआमा सकी–नसकी एक–दुई बचन बोल्दा आफूलाई धन्य ठानेकी थिइन् उनले । कम से कम हजुरआमाले त मलाई स्वीकार्नुभयो, आशिष् दिनुभयो भनेर हर्षले आँशु झारेकी थिइन् ।
‘त्यति साह्रो हेँला गरी नहाल, लेखेको कुरा र भागभोगको कुरा हामी मेट्न सक्दैनौँ । के थाहा ? मर्ने बेलामा उनै विजात बुहारीको हातको पानी पो पिउनु पर्ने हो कि !’ बूढीसासूले सासू रमादेवीलाई भनेको कुरा परितोषिकाको कानमा पनि ठोक्किन पुग्यो ।
‘त्यस्तो हुनलाई त बस्नुपर्‍यो नि गाउँमै । हाम्रै चलन लिन सक्नुपर्‍यो । एक त कुल, धर्म, जातभात केही नमिल्ने, अर्कोतिर सहरकी पढेकी बुहारी । मेरो छोरा आरकीडलाई पनि एकोहोरो बनाइसकी । ऊ पनि अब यो गाउँमा बस्ने छैन । बेकार हामीले सहर पढ्न पठाएछौँ’– सासू रमादेवीको यो बचनले परितोषिकाको मनलाई हल्लाएर छोड्यो ।
उनले त्यही बेलादेखि अठोट गर्न पुगिन् कि अब उनी आरकीडको परिवारमा रंगिएर यो गाउँलाई आफ्नो बनाएर छाड्नेछिन् । आखिर त्यो गाउँप्रति अरु गाउँलेहरु सरह आफ्नो पनि केही दायित्व छ, कर्तव्य छ भन्ने कुराको महसुस गर्न थालिन् । गाउँका शिक्षितहरु सहर पस्ने र सहरका शिक्षितहरु विदेश भासिने वर्तमान अवस्थाले देशलाई गाँज्दै लगेको कुराप्रति मनन गर्न थालिन् परितोषिकाले । अब उनी गाउँको संस्कृति, त्यहाँको जीवनलाई बुझ्ने र नजिकबाट जान्ने, त्यसपछि केही आमूल परिवर्तनहरु ल्याउने लक्ष्य र योजना बुन्न थालिन् ।
घरमा उनकी जेठानी वरुणा दिनरात अहोरात्र खटेर घरधन्दा, बालबच्चा स्याहारसुसारदेखि गाईवस्तु, खेतबारी सबैमा खटिई रहन्थिन् । उनी चुपचाप रहन्थिन्, मुखै नखोली कानैले मात्र सुनेर एकोहोरो काम गरिरहन्थिन् । परितोषिकासँग पनि उनी खासै बोल्दिन थिइन् । तर परितोषिका भने हरपल वरुणाको नजिक नै जाने गर्थिन् ।
परितोषिका पाँच बजे उठेर चुलोभन्दा बाहिरको काममा वरुणालाई सघाउँथिन् । वरुणा एक्लै बिहानदेखि साँझसम्म सम्पूर्ण घरधन्दामा अल्झिरहन्थिन् । तीन–तीन जना स–साना वर्षौटे छोरीहरुलाई सम्हाल्नु, स्याहार्नु सजिलो कुरा थिएन । उनका श्रीमान् आदेश नेतागिरी गरेर हिँड्दैमा बेफुर्सदी थिए । कहिल्यै श्रीमतीको लागि समय दिन उनले जानेनन् । फुर्सद हुँदा कि त काली नानीको भट्टी, कि त डल्ले साउको पसलमा दौडन्थे । तास खेल्ने, क्यारेमबोर्ड खेल्ने, बच्चाले झैँ बेलाबखतमा त्रिपासा पनि लडाइहाल्थे । घरमा हुँदा छोरा जन्माउन नसकेकोमा श्रीमतीलाई भकुर्दै कान्छी ल्याउने धम्की दिइराख्थे । सासूससूरा पनि वरुणासँग रूष्ट नै थिए । नातिको अनुहार यिनले त देखाइनन्, तिमी दुई जना त हामीलाई निराश नपार नि’, परितोषिका र अनुष्कालाई सुनाउने क्रममा वरुणामाथि तिखो बाण चलाई रहन्थिन् सासू रमादेवी । अनुष्का त्यही साल बिहे भएकी कान्छी बुहारी थिइन् ।
यस्तैमा तीज आयो । नजिकै घरमा नन्द, अमाजूहरु आउने भए तर बिहे भएदेखि माइती जान नपाएकी वरुणाको लागि तीजको रमझम फेरि पनि आएन । निराश मनले भए पनि परम्पराको नाममा आफूलाई बलि दिने क्रम भने जारी राख्ने भइन् । व्रत बस्ने भइन् । घरमा दरको बेला धेरै जनाको लागि पकवान तयार पार्ने भइन् । स्वास्नीको लागि आफ्नो लोग्ने हुनुको कर्तव्य र दायित्वबोध गर्न नसक्ने निकम्मा लोग्नेको नाममा व्रत बस्ने भइन् । उनको पेट र छाती सधैँ दुखिरहन्छ । बेलाबेला चक्कर आउँछ, पसिना चिटचिट आउँछ । कसैलाई वास्ता छैन यसप्रति । दिनभरि, रातभरि, निराहार व्रत बसेर, बिहान पूजाविधि सकाएर लोग्नेको र सासूको खुट्टा धोएर ढोगी पानी पिएमात्र व्रत तोडिन्छ उनको । गत साल मन्दिरमा लाम लागेर बस्दा घामको रापतापले उनी बेहोस भइछिन् । उनलाई पानी छम्केर ब्युँताए तर पानी पिउन दिएर र कहीँ खाना दिएर व्रत तोड्ने दुस्साहस र ‘अधर्मी काम’ कसैले गर्न सकेनन् ।
परितोषिकालाई अब यो घरमा आएकोमा र यसरी घर पठाउने काममा सहयोग गरेकोमा गंगा आमालाई धन्यवाद दिन मन लाग्छ । उनले त्यही गाउँमा खोलेको स्थानीय रेडियोमा काम गर्ने निर्णय गर्छिन् । नारी जागरणको विषयमा, स्वास्थ्य कार्यक्रम तयार पार्छिन् । गाउँघरको सबै विषयमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गरेर उनलाई त्यही गाउँको भएर बस्न मन लाग्छ । उनको यो निर्णयले वरुणाको पनि आत्मबल बढ्न थाल्छ । परितोषिकाको सहयोग र मायाले उनको ओइलिसकेको जीवनमा सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ, मरेको चेतना जागृत हुन्छ । ओइलेको जीवन हराभरा र ताजा लाग्न थाल्छ । वरुणाजस्तै ताप–सन्तापमा परेका नारीहरुको निमित्त परितोषिका चिसो पानी थिइन्, अँध्यारोको ज्योति थिइन् । उनको निर्णयअनुसार नै अब बिस्तारै गाउँ बदलिरहेको आभाष गरे सबैले । रेडियोबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम, नारी समस्या समाधान आदिजस्ता कार्यक्रम चलाउन थालिन् । तीज परम्पराअनुसार सबै महिला मिलेर मान्न थाले । व्रतका दिन पुरूषहरू घरधन्दा सम्हाल्ने भए । वरुणालाई व्रत नबस्न र स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सहर लाने कुरामा परितोषिकाले जोड दिन थालिन् । त्यसमा सबै महिलाले साथ दिए । जसको स्वास्थ्य कमजोर छ, उनीहरुले व्रत नबसेको बेस र जो व्रतालु स्वस्थ छन्, उनीहरुले जल र फल सेवन गर्नुमा कुनै आपत्ति छैन । धर्म र संस्कृति समयअनुसार परिमार्जित र परिवर्तन हुँदै जाने कुरा भएकाले आफ्नो अनुकूलताअनुसार मानिसलाई चल्न दिनुपर्छ । गर्भावस्था र बच्चालाई दूध पिलाउने आमाले, वृद्ध आमाबाबुले पनि व्रत नगर्नु र कुनै पनि हालतमा खुट्टा धोएर पानी पिउने नगर्नु । यसबाट आफ्नो आत्मसम्मान खस्किने कुरा छँदै छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा मैलो पानी पिउँदा रोगको सिकार बन्नुपर्छ । परितोषिकाले यस्तै सन्देश दिन थालिन् हरेक दिन । उनकी आमा गंगादेवीले पनि धेरै महिलाहरुलाई खुट्टा धोएर पानी नपिउने सल्लाह दिएको याद गरिन् । हो त नि, कहाँ हामी अब चुप लागेर कुरीतिलाई पालना गर्छौँ र ? अब त यसलाई फाल्ने गर्छौँ । स्वास्नीलाई सम्पत्ति ठानेर मनपरी व्यवहार गर्ने, छोरा नपाएको र सन्तान नजन्माएको आरोप लगाई घरबाट निकाल्ने, रक्सीजाँड पिएर घरमा …………….. .
११ आश्विन २०६९, बिहीबार २१:४० मा प्रकाशित